ဆောင်းယွန်းလ – မကျေနပ်တာတွေအတွက် ကျေနပ်တယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းယွန်းလ – မကျေနပ်တာတွေအတွက် ကျေနပ်တယ်
နေမသာခဲ့တဲ့ နေ့တွေက တဘ၀လုံး ….
ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ အရာရာမှားခဲ့ဖူးတယ် …
လမသာခဲ့တဲ့ ညတွေက တဘ၀လုံး….
ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ မှားခဲ့ ခါးခဲ့ရပေါ့…
နေရဲရဲ သေရဲရဲ ဘ၀တွေနဲ့
ရာစုနှစ်များစွာထဲ ကြယ်ကြွေချိန်တိုင်း တောင်းတဲ့ဆု
အခုတော့ ပြည့်ခဲ့ပြီ မေမေ…
မကျေနပ်ပေမယ့်လည်း ကျေနပ်ခဲ့ပါပြီ မေမေ..။
ဆောင်းယွန်းလ (မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၁၆)
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI about 59 minutes ago ReplyRetweetFavorite